डाटा वैज्ञानिकहरू 2022 मा ब्लकचेन रोजगारहरू हेर्दै छन्: यहाँ किन छ - Shiv's Era
डाटा वैज्ञानिकहरू 2022 मा ब्लकचेन रोजगारहरू हेर्दै छन्: यहाँ किन छ
किन डाटा वैज्ञानिकहरू ब्लकचेन डाटा वैज्ञानिक रोजगार समीक्षाहरू 2022 मा हेरिरहेका छन्?
ब्लकचेन र डाटा विज्ञान को सम्भाव्यता के हो?
यी प्रविधिहरूले उद्योगहरूलाई कसरी परिवर्तन गर्नेछ?
डेटा वैज्ञानिक बन्न, यसले के लिन्छ?
डाटा विज्ञान डाटालाई उपयोगी बनाउने अनुशासन हो। Bitcoin रेकर्डहरूको बढ्दो सूची हो, ब्लक भनिन्छ, जुन क्रिप्टोग्राफी प्रयोग गरेर लिङ्क गरिएको छ। डाटा वैज्ञानिक निर्णय लिने प्रक्रियाहरूमा निरन्तर महत्त्वपूर्ण हुँदै गइरहेको छ।
ब्लकचेन विकासकर्ताहरूको माग बढ्छ, डाटा वैज्ञानिकहरूले थप अन्तरदृष्टि प्रदान गर्छन्
ब्लकचेनका बिभिन्न एप्लिकेसनहरूमा काम गर्ने परियोजनाहरू जस्तै पछिल्ला केही वर्षहरूमा ब्लकचेन विकासकर्ताहरूको माग बढेको छ। डाटा वैज्ञानिकहरूले डाटासँग थप अन्तरदृष्टि प्रदान गर्न र थप समस्याहरू समाधान गर्न मद्दत गर्न सक्छन्।
के ब्लकचेन इन्टरप्राइज टेक्नोलोजीमा अर्को ठूलो कुरा हो?
दुबै ब्लकचेन र डाटा विज्ञान डाटासँग सम्झौता गर्दछ। डाटा विज्ञानले कार्ययोग्य अन्तर्दृष्टिहरूको लागि डाटा विश्लेषण गर्दछ, जबकि ब्लकचेन रेकर्ड र डाटा प्रमाणीकरण गर्दछ। दुबैसँग व्यवसाय चलिरहेको तरिकामा क्रान्ति ल्याउने क्षमता छ।
डाटा विज्ञानको लागि ब्लकचेन प्रयोग गर्ने फाइदाहरू
डिजाइनद्वारा ब्लकचेनहरूले धेरै फाइदाहरू प्रदान गर्दछ जुन डाटा विज्ञान अनुप्रयोगहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ। डाटा विज्ञान समस्या समाधानका लागि डाटाबाट सान्दर्भिक अन्तर्दृष्टिहरू उत्पन्न गर्नमा केन्द्रित छ। Blockchains लाई कुनै पनि जानकारी प्रदान गर्न को लागी आफ्नो प्रयोगकर्ताहरु को व्यक्तिगत जानकारी को आवश्यकता छैन।
ब्लकचेन डाटा वैज्ञानिकले के गर्छ?
चाखलाग्दो र समाधान नभएको ब्लकचेन डाटा विज्ञान समस्याहरूको दायरा ठूलो छ। त्यसैले, यो ब्लकचेन डाटा वैज्ञानिक बन्ने सही समय हो।